Sezvo iwe ungave uchinyatso kuziva parizvino, iyo yakagadzikana vhezheni yeApple 11 zvino yasunungurwa kuvanhu. Google's Pixel nhare dzemafoni uye mashoma eXiaomi zvishandiso kujoina iyo yekuvandudza chitima kusvika zvino, nepo zviri pamutemo beta inovaka zviripo kune iyo OnePlus 8 mutsara, ivo Samsung Galaxy S20 yakatevedzana, uye mamwe mafoni emafoni kubva kumaOEMs akasiyana. Kodhi kodhi yeiyo nyowani iteration ye Android iri kumusoro uye inowanika kuAOSP naizvozvowo, zviri pachena kuti chinhu chakakosha pakurongedza Android 11-yakavakirwa tsika maROM. Nyaya yezvokwadi, iyo Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9T Pro akatogamuchira vanilla inoshandiswa AOSP 11 ROM. Iye zvino, akawanda Android 10 tsika maROM atanga kubuda mumaforamu edu emidziyo senge Xiaomi POCO F1, OnePlus 5/ 5T, Essential Phone, uye iyo ASUS ZenFone Max Pro M1; uye isu tinotarisira kuti zvakatowanda kuuya munzira munzira mumavhiki anotevera. Tichawedzera nekuvandudza iyi runyorwa nemamwe ekutanga seti yeApple 11 inovaka uye tsika tsika maROM emhando dzakasiyana dzemidziyo!
Chinyorwa chemidziyo ine Android 11 Tsika dzeROM:
Urwu ndirwo runyorwa razvino rwezvigadzirwa zvakagashira iyo Android 11 tsika ROM:
Yechipiri Chizvarwa Android Imwe (Qualcomm)
Google Pixel uye Pixel XL
HTC Anoda Ziso
Lenovo ZUK Z2 / ZUK Z2 Uyezve
Moto G2015 uye Moto G3 Turbo
Moto G5S Uyezve
OnePlus 3 uye OnePlus 3T
OnePlus 5 uye OnePlus 5T
Samsung Galaxy S4 LTE Yepamberi
Samsung Galaxy S4 Mini Kukosha Edition
Samsung Galaxy S7 uye Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, uye Galaxy S10 Plus
Kupinza Aquos S2
Sony Xperia 10 Uyezve
Redmi 5 Uyezve / Redmi Cherechedzo 5
Redmi 7 uye Redmi Y3
Redmi Cherechedzo 5 / Redmi Cherechedzo 5 Pro
Redmi Cherechedzo 7 / 7S
Redmi Cherechedzo 8 uye Redmi Cherechedzo 8T
Redmi Cherechedzo 9S / 9 Pro India, Redmi Cherekedza 9 Pro Max, uye DUKU M2 Pro
Xiaomi Mi 3 uye Tiri 4
Xiaomi Mi 5s Uyezve
Xiaomi Yangu A1
Xiaomi Yangu A2
Xiaomi Yangu A2 Lite
Xiaomi Yangu A3
Xiaomi Mi Max uye Mi Max Prime
Xiaomi Nyaya Yangu 3
Xiaomi Mi Cherekedza 10 Lite
Xiaomi Mi Pad 4 uye Mi Pad 4 Uyezve
Ongorora: Muchinyorwa chino, isu tichava chete tichipa chinongedzo kune yekutanga Android 11 yetsika ROM yatinosangana nechimwe chigadzirwa. Izvi hazvishande sekubvumidzwa kweiyo chaiyo kuvaka, uye hatisi kukurudzira kuti basa revamwe rinofanirwa kufuratirwa. Tiri kudzikamisa izvo zvatinobatanidza nazvo kuitira kudzivirira chinyorwa ichi kuti chisanyanya kureba. Ndokumbira kuti mushanyire maforamu eXDA echigadzirwa chako kuti uone kana paine zvimwe, zvingangove zvakakwana, zvinovaka zviripo.
1. Android Imwe
Mudziyo, Midziyo yeMidziyo, Codename
Android 11 Tsika ROM
1. Chechipiri Chizvarwa Android Imwe - Qualcomm (mbeu) KutsivaOS 4.0 September 24, 2020
1.1. Yechipiri Chizvarwa Android Imwe (Qualcomm)
Yakatangwa kumashure muna2015, Android One's Snapdragon 410-powered yechipiri michina yechizvarwa ikozvino yagamuchira kubatana kwakabatana kweRevengeOS 4.0 pamusoro peiyo Android 11. Iyo ROM yakatanga yakanyorerwa General Mobile 4G, asi inoenderanawo neCherry Mobile One. G1 uye i-nhare IQ II.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeChipiri Chizvarwa Android One (Qualcomm) mafoni
Kunze kwe yepamutemo yeruzhinji beta vhezheni yeApple 11 kubva kuASUS, ZenFone 6 vashandisi vanogona zvakare kuyedza yepamutemo BlissRoms 14 yetsika ROM kuti vawane kuravira kweazvino iteration yeApple pafoni yavo.
BlissROMs 14 yakavakirwa Android 11 yeiyo ASUS ZenFone 6
ASUS ine zvakadaro kutsikisa yakagadzikana Android 10 kuvaka yeZenFone Max Pro M1, asi yedu inonakidza aftermarket yekuvandudza nharaunda yatouya neiyo yakachena Android 11-based AOSP ROM yefoni iyi. Iyo ROM inoda kuita zvizere, iine zvese zvakakosha zvemahara maficha ari kushanda.
AOSP 11.0 yeiyo ASUS ZenFone Max Pro M1
1. Inokosha foni PH1 (mata) StatiXOS v4.0 September 17, 2020
3.1 Yakakosha Runhare PH1
Android 11 pane yakakosha Runhare inowanikwa muchimiro cheStatiXOS v4.0. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, Bluetooth haisi kushanda parizvino, uye kufona paVerizon kunogona kutyorwa. Sezvo ichi chiri chekutanga kuburitswa alfa, iyo ROM haina kana yakasarudzika yakasarudzika parizvino uye inogona kutariswa seAOSP inovaka nemamwe maratidziro eStatiXOS.
StatiXOS v4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Inokosha Runhare
1. Google Nexus 6P (chibatiso) StatiXOS v4.0 October 20, 2020
MutsaraOS 18.0 October 7, 2020
Kana iwe uine Google Nexus 6P yakarara yakatenderedza uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, enda ipapo kumberi uye uone iyo StatiXOS v4.0 tsika yeROM yakabatana pazasi.
StatiXOS v4.0 yakavakirwa pane Android 11 yeGoogle Nexus 6P
4.2. Google Pixel uye Pixel XL
Yekutanga Google Pixel uye Pixel XL, iyo yakaburitswa munzira yese kumashure mu2016, akagamuchira iyo yepamutemo Android 10 kugadzirisa kumashure munaGunyana gore rakapera. Kunyange ivo vasina kukodzera zviri pamutemo kuti vatore iyo Android 11 yekuvandudza kubva kuGoogle, unogona ikozvino kuyedza yazvino vhezheni yeApple pane foni duo uchishandisa unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 tsika ROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11: Google Pixel || Google Pixel XL
1. F (x) tec Pro1 (pro1) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
London-based startup F (x) tec yakatanga Pro1 kumashure munaGunyana gore rapfuura. Iyo foni yakashandawo sehwaro hweedu yedu XDA foni: iyo Pro1-X. Uye ikozvino, chishandiso chine vakagamuchira unofficial LineageOS 18.0 kuvaka kunobva Android 11.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo F (x) tec Pro1
1. HTC 10 (pme) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
2. HTC Chido Ziso (eyeul) MutsaraOS 18.0 October 16, 2020
3. HTC Imwe E8 (e8 / e8d) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
4. HTC Imwe M7 (m7) MutsaraOS 18.0 November 9, 2020
5. HTC Imwe M8 (m8) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
6. HTC Imwe M9 (hima) AICP 16.0 October 12, 2020
7. HTC Imwe Max (t6) MutsaraOS 18.0 October 20, 2020
8. HTC U Ultra (oce) MutsaraOS 18.0 October 16, 2020
Iyo HTC 10 yagamuchira unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11. Unofanirwa kuve pane ichangoburwa Oreo firmware kubva muchitoro HTC Sense firmware usati wabhenekesa iyo tsika ROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC 10
6.2. HTC Chido Ziso
Kana iwe uchiri neHTC Desire Ziso uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, wozoenda kumberi uye utarise unofficial LineageOS 18.0 tsika yeROM yakabatana pazasi. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, ese ari maviri Wi-Fi neBluetooth zvakaputswa, uye iyo UI yakasarudzika.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC Chido Ziso
6.3. HTC Imwe E8
Android 11 pane iyo HTC One E8 inowanikwa mune isiri yeofficial LineageOS 18.0 ROM. Unogona kuwana akasiyana anovaka iyo imwechete SIM (htc_mecwhl, htc_mectl, htc_mecul, htc_mecul_emea) uye iyo mbiri SIM (htc_mecdug, htc_mecdugl, htc_mecdwg, htc_mecdwgl) pazasi musiyano muROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC One E8
6.4. HTC Imwe M7
HTC haina kugadzirisa iyo yekutanga HTC One M7 kupfuura Android Lollipop, asi izvo hazvireve kuti haugone kumhanyisa vhezheni yazvino yeApple pafoni iyi. Kuvaka kusiri pamutemo kweLineageOS 18.0 yakavakirwa paApple 11 yave kuwanikwa ye "m7ul" musiyano weHTC One M7.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC One M7
6.5. HTC Imwe M8
Kune avo vamuri kumirira nechido Android 11-yakajairwa tsika maROM kune yako HTC One M8, isu tine mamwe mashoko akanaka kwauri: unofficial Lineage OS build ikozvino yazopedzisira yatanga kupinda. Kana iwe uchida kuyedza iyo, musoro pamusoro kune foramu tambo pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC One M8
6.6. HTC Imwe M9
Iyo HTC One M9 - foni yakatanga kuburitswa muna2015 neApple Lollipop - yagamuchira yayo yekutanga Android 11-yakavakirwa tsika ROM kuburikidza neiyo isiriyo kuvaka Android Ice Cold Project 16.0. Vagadziri veROM vakapawo inoenderana GApps kuvaka. Ipa yako HTC One M9 chisi chitsva chehupenyu neApple 11 nekutevera iyi link iripazasi.
AICP 16.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC One M9
6.7. HTC Imwe Max
Yakavhurwa kumashure mu2013, iyo Snapdragon 600-inofambiswa HTC One Max ikozvino yagamuchira unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 yakavakirwa pa Android 11. Ziva kuti izvozvi kuvaka kunongoenderana chete neiyo "t6ul" musiyano.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC One Max
Imba isiriyo ye LineageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11 yave kuwanikwa iyo HTC U Ultra. Iyi ROM ine dzimwe nyaya ne USB yekubatanidza uye isina waya hotspot, asi kana iwe uchikwanisa kukanganwa izvo, iwe unogona kuve neyako yekutanga kuravira kweazvino Android vhezheni.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo HTC U Ultra
1. Lenovo Z6 Pro (zippo) KutsivaOS 4.0 September 17, 2020
2. Lenovo ZUK Z2 / Z2 Plus (z2_plus) MuseveOS 11.0 September 21, 2020
Chikwata chiri kumashure kweRevengeOS tsika ROM ichangoburitsa yayo yekutanga Android 11-yakavakirwa iyo Lenovo Z6 Pro. Hatina kukwanisa kuwana runyorwa rwebug yeROM, asi izvozvo hazviite kuti igadzirire kuve mutyairi wezuva nezuva. Izvo zvinogara zvirinani kusevha rese rakakosha dhata usati watanga kupinda munyika yekubuda ropa-kumucheto kukura.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeLenovo Z6 Pro
7.2. Lenovo ZUK Z2 / Z2 Uyezve
Iyo yepamutemo inovaka iyo ArrowOS tsika ROM yakavakirwa Android 11 yave kuwanikwa yeLenovo ZUK Z2 / Z2 Plus. Iro ROM yakareruka barebones padanho razvino, saka michina-yakatarwa maficha senge UTouch maitiro haasvikike parizvino.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeLenovo ZUK Z2 / Z2 Plus
1. LG G2 (d800/d801/d802/d803/ls980/vs980) MutsaraOS 18.0 November 9, 2020
2. LG G5 (h830 / h850 / rs988) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
3. LG V20 (h910/h918/ls997/vs995/us996/h990) MutsaraOS 18.0 October 30, 2020
Kuvaka kusiri pamutemo kweLineageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11 iko zvino kwave kuwanikwa kune LG G2. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo yakabatanidzwa pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo LG G2
XDA Senior Nhengo aleasto yakatumira yekutanga unofficial chiteshi cheiyo Android 11 ye LG G5 pamusoro pemaforamu edu.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo LG G5
Android 11 pane LG V20 inowanikwa mune isina unofficial LineageOS 18.0 ROM. Unogona kuwana akasiyana anovaka iyo AT&T (h910), T-Mobile (h918), Sprint (ls997), Verizon (vs996), US Unlocked (us996), uye yepasi rose (h990) akasiyana muROM tambo yakabatana pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo LG V20
1. Moto E 2015 (surname) MaluOS 2.0 October 2, 2020
MaluOS 2.0 October 2, 2020
3. Moto G4 Play (harpia) MaluOS 2.0 October 2, 2020
4. Moto G5 Plus (muumbi) MuseveOS 11.0 October 7, 2020
5. Moto G5S (montana) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
6. Moto G5S Plus (sanders) MuseveOS 11.0 November 19, 2020
7. Moto G7 Simba (nyanza) KutsivaOS 4.0 September 17, 2020
Iyo LTE musiyano weMoto E 2015 inowana kuravira kweiyo Android 11 muchimiro cheMalluOS 2.0 tsika ROM. Iwe unofanirwa kuve pane ichangoburwa stock Android Marshmallow firmware usati wabhenekesa iyo tsika ROM.
MalluOS 2.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto E 2015
9.2. Moto G 2015 uye Moto G3 Turbo
Chizvarwa chechitatu Moto G, AKA Moto G 2015 uye ayo "Turbo" musiyano akagamuchira akapatsanurwa madoko eMalluOS 2.0 tsika ROM pamusoro peiyo Android 11. Kune mashoma mabhugi ayo iwe aungazoda kubata nawo, zvakadaro. Semuenzaniso, kurekodha vhidhiyo kwakatyoka, uye VoLTE haisi kushanda.
MalluOS 2.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto G 2015 / Moto G3 Turbo
9.3. Moto G4 Tamba
Kana iwe uine Moto G4 Play uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, enda ipapo kumberi uye utarise iyo MalluOS 2.0 tsika ROM yakabatana pazasi.
MalluOS 2.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto G4 Play
9.4. Moto G5 Uyezve
Iyo yepamutemo kuvaka kweArrowOS pamusoro peiyo Android 11 inowanikwawo kune Moto G5 Plus. Iyi ROM ine zvimwe zvimisikidzo neisina waya hotspot uye SELinux marongero, asi kana iwe ukakwanisa kuzvikanganwa izvo, iwe unogona kuve neyako yekutanga kuravira yazvino Android vhezheni.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto G5 Plus
Iyo Motorola Moto G5S yakavhurwa kumashure muna Nyamavhuvhu wa2017, ichiunza kukwidziridzwa kwehafu yegore pamusoro peMoto G5. Foni ikozvino yagamuchira unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 yakavakirwa pa Android 11. Ziva kuti yakareba kwenguva yekutanga bhuti nguva yakajairwa nekuda kwekumanikidzwa kunyorera.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto G5S
9.6. Moto G5S Uyezve
Kune avo vamuri kumirira nemoyo wese Android 11-yakavakirwa tsika maROM kune yako Moto G5S Plus, isu tine dzimwe nhau dzakanaka kwauri: iyo yepamutemo kuvaka kweArrowOS iri pakupedzisira pano. Iwe unofanirwa kuita backup yeiyo "pfuurira" partition usati wabhenekera iyi ROM.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Moto G5S Plus
9.7. Moto G7 Simba
Vagadziri Electimon, erfanoabdi, naLucchetto00 vakabatana kuti vaburitse chivakwa chisina kukodzera cheRevengeOS chakavakirwa Android 11 yeMoto G7 Simba. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine runyorwa rwebug rinongotaura chete kuti NFC inogona kunge isiri kushanda.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeMoto G7 Simba
1. Nokia 6.1 (pl2_sprout) MutsaraOS 18.0 October 20, 2020
3. Nokia 6.2 (sld_sprout) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
4. Nokia 7 Plus (b2n_sprout) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
5. Nokia 7.1 (ctl_sprout) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
6. Nokia 7.2 (ddv_sprout) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
Android 11 paNokia 6.1 inowanikwa muchimiro cheiyo isiri iyo LineageOS 18.0 ROM. Kunze kwekubvumidza SELinux modhi, pane zviripo hapana hombe bug mune yazvino kuvaka.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 6.1
10.2. Nokia 6.1 Uyezve
Iyo Nokia 6.1 Plus inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza nePotato Open Sauce Project (POSP) tsika ROM. Iyi ROM inoda mutsika mutengesi kuitisa, saka ita shuwa yekurodha pasi uye kupenya iyo yazvino mufananidzo kubva ku Nharaunda Vendor chirongwa zvemuchina uyu zvisati zvaitika.
POSP 4.0.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 6.1 Plus
Iyo isina kufanira kuvaka ye LineageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11 yave kuwanikwa yeNokia 6.2. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine bug runyorwa ruchingotaura chete kuti SELinux inobvumidza.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 6.2
10.4. Nokia 7 Uyezve
Kana iwe uine Nokia 7 Plus uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, enda mberi uye utarise unofficial kuvaka yeLinageOS 18.0 yakabatana pazasi. Iro ROM inoita kunge yakagadzikana zvakakwana, iine zvese zvakakosha zvemaficha zvinoshanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 7 Plus
Iyo isina kufanira kuvaka yeakakurumbira LineageOS tsika ROM yakanangana neApple 11 yave kuwanikwa yeNokia 7.1. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 7.1
Android 11 pane Nokia 7.2 inowanikwa muchimiro cheiyo isiri iyo LineageOS 18.0 ROM. Nhau hombe pano ndeyekuti SELinux mune iyi ROM yakaiswa sekumanikidza.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeNokia 7.2
1. OnePlus 2 (oneplus2) MutsaraOS 18.0 October 16, 2020
OnePlus 5T (kurasa marara)
6. OnePlus 7 (guacamoleb) Evhangeri X November 19, 2020
7. OnePlus 7 Pro (guacamole) MutsaraOS 18.0 October 16, 2020
9. OnePlus 7T Pro (hotdog) MutsaraOS 18.0 October 20, 2020
Kana iwe uchitsvaga iyo Android 11-yakavakirwa tsika ROM kune yako OnePlus 2, unogona kuyedza iyo isiriyo yeLineageOS 18.0 ROM. Kune mamwe mabugs, zvakadaro, saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako zvakafanana usati waenderera.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 2
11.2. OnePlus 3 uye OnePlus 3T
Chikwata chiri kumashure kweHavoc-OS tsika ROM ichangoburitsa yayo yekutanga Android 11-yakavakirwa iyo OnePlus 3 uye OnePlus 3T. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
Havoc-OS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 3 / 3T
11.3. OnePlus 5 uye OnePlus 5T
Kana iwe uine OnePlus 5 kana OnePlus 5T uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, enda kumberi uye utarise tsika yeROM yakabatana pazasi. Yakadanwa se "Asi imwe chirongwa cheAOSP" (YAAP), haina chinopfuura kungoita nyore kweAOSP kuvaka. Mazhinji maficha-akasarudzika maficha ari kushomeka, asi izvo ndezvechokwadi sezvatichiri mumazuva ekutanga uye izvi maficha zvichagadziriswa padivi rekunobva nekufamba kwenguva.
YAAP yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 5 / 5T
Yepamutemo ArrowOS inovaka yakavakirwa Android 11 inowanikwawo kune iyo foni duo. SELinux inobvumidza, zvakadaro, uye kunyorera chishandiso hakutsigirwe parizvino muROM.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 5 / 5T
Iyo Android 11-based POSP inovaka yave kuwanikwa kune iyo OnePlus 6. Iyi ROM inoratidzirwa seyakavaka alpha, saka isu tinopa zano chete vane ruzivo vashandisi vanoyedza panguva ino. Iyo yekutsvedza inotsvedza yechigadzirwa haigone kushandiswa, uye panogona kunge paine dzimwe nguva tsaona nekamberi kamera. Kune mamwezve mabugs, saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako zvakafanana usati waenderera.
POSP 4.0.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 6
Saizvozvo, Android 11 pane OnePlus 6T inowanikwa muchimiro chePOSP. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, yekutsvedza inotsvedza haisi kushanda parizvino uye iyo kamera kamera app dzimwe nguva inopunzika ichipfura nekamberi kamera - senge isiri-T musiyano.
POSP 4.0.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 6T
Kune avo vamuri kumirira nemoyo wese Android 11-yakavakirwa tsika maROM kune yako OnePlus 7, isu tine dzimwe nhau dzakanaka kwauri: iyo yepamutemo kuvaka kweEvolution X iri pano. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, iyo OxygenOS kamera app haishande mushe uye kupenya kunochinja kwakatyoka
Evhangeri X yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 7
Android 11 pane OnePlus 7 Pro inowanikwa muchimiro cheasina kufanira LineageOS 18.0 ROM. Kunze kwekutyora isina waya kuratidza, panenge pasina hombe bug mune yazvino kuvaka.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 7 Pro
Iyo OnePlus 7T yakagamuchira kuravira kweiyo Android 11 neruremekedzo rwevanilla AOSP tsika ROM inozivikanwa se "Asi imwe chirongwa cheAOSP" (YAAP). Kusiyana neyakajairwa tsika maROM, iwe unofanirwa kuisa iyo package uchishandisa Fastboot.
YAAP yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 7T
Android 11 inosvikawo pane iyo "Pro" musiyano weOnePlus 7T kuburikidza neyakavanzika kuvaka LineageOS 18.0. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo yakabatanidzwa pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo OnePlus 7T Pro
OnePlus haisati yatsikisa yakagadzika Android 11 kuvaka kune ichangoburitswa OnePlus Nord, asi yakachena Android 11-yakavakirwa AOSP ROM yefoni iyi yatovepo pane edu maforamu. Iyo ROM inoda kuita zvizere, iine zvese zvakakosha zvemahara maficha ari kushanda.
AOSP 11.0 yeiyo OnePlus Nord
Kunyangwe isiri yechizvarwa Android-inogadzirwa mudziyo, iyo Raspberry Pi 4 inopa inoshamisa specs mune ese-anozivikanwa kiredhiti kadhi-saizi mharidzo. Kutenda kune iyo OmniROM chirongwa, izvozvi zvave kuita bhuti Android 11 pane wese munhu anodikanwa akadhura emuchina weLinux .
OmniROM 11 yakavakirwa Android 11 yeiyo Raspberry Pi 4
1. Realme 3 Pro (RMX1851) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
2. Realme 5 Pro (RMX1971) Evhangeri X November 19, 2020
3. Realme X (RMX1901) AospEkuwedzera 8.0 October 12, 2020
6. Realme XT (RMX1921) KutsivaOS 4.0 September 24, 2020
Iyo Realme 3 Pro yakagamuchira doko reLineageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11. Iyo ROM inowirirana neiyo Realme X Lite futi. Iwe unogona kuwana izvo-zvakasarudzika maficha senge Game Mode uye FPS yakafukidzwa pasi peZvirongwa -> Realme Zvirongwa.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Realme 3 Pro
Kune avo vamuri kumirira nechido Android 11-yakavakirwa tsika maROM kune yako Realme 5 Pro, isu tine dzimwe nhau dzakanaka kwauri: iyo yepamutemo kuvaka kweEvolution X iri pano. Hatina kukwanisa kuwana bug runyorwa rweROM, asi izvo hazviite kuti igadzirire kuve mutyairi wezuva nezuva zvinhu. Ita backup data rese rakakosha usati wabhenekera.
Evhangeri X yakavakirwa Android 11 yeiyo Realme 5 Pro
Kana iwe uchine Realme X yakarara, unogona ikozvino kupenya iyo isiri iyo yeAospExtended 8.0 ROM yakavakirwa Android 11 pafoni yako. Iyo AOSP / CAF yakavakirwa ROM inopa yakachena stock stock Android ruzivo, asi ichiri iine mashoma emabhugi ayo anoda kubviswa. Edza izvi pane yako Realme X nekutevera iyi link iripazasi.
AospExtended 8.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Realme X
Android 11 pane iyo Realme X2 inowanikwa muchimiro chevanilla AOSP 11.0 ROM. Kunze kwe headphone jack odhiyo nzira, panenge pasina hombe bug mune yazvino kuvaka.
AOSP 11.0 yeiyo Realme X2
Yekutanga yechokwadi mureza mudziyo kubva kuRealme - iyo Realme X2 Pro - ikozvino yagamuchira vhiza revanilla AOSP 11.0. Iyo tsika yeROM inopa yepedyo-stock Android chiitiko ine mashoma eeti-yakatarwa sarudzo yekugadzirisa sarudzo. Usati waenderera kumberi uye uchimenya pafoni yako, ziva kuti ungangosangana nenyaya dzine chekuita nemasaini ekunze uye kurira kwekuburitsa nekuvaka uku.
AOSP 11.0 yeiyo Realme X2 Pro
Kana iwe uchitsvaga iyo AOSP 11-yakavakirwa ROM pane iyo Realme UI pane yako Realme XT, unogona kusarudza iyo isiri yepamutemo RevengeOS 4.0 ROM. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine runyorwa rwebug rinongotaura chete kuti SELinux inobvumidza.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Realme XT
1. Samsung Galaxy Cherechedzo 10+ (d2s / d2x) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
2. Samsung Galaxy S III (i9300) MutsaraOS 18.0 October 30, 2020
3. Samsung Galaxy S4 LTE Yepamberi (ks01lte) crDroid 7.0 October 16, 2020
4. Samsung Galaxy S4 Mini Kukosha Edition (serranovelte) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
7. Samsung Galaxy S10e (inopfuura0lte)
Samsung Galaxy S10 (kupfuura1lte)
MutsaraOS 18.0 October 12, 2020
8. Samsung Galaxy Tab S5e (gts4lv) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
14.1. Samsung Galaxy Cherechedzo 10+
Samsung ina zvakadaro kutsikisa yakagadzikana Android 11 kuvaka yeiyo Galaxy Note 10 dzakateedzana, asi yedu inonakidza aftermarket yekuvandudza nharaunda yatouya neiyo yakachena Android 11-yakavakirwa AOSP ROM yeCherechedzo 10+. Iwe unogona kuwana akaparadzaniswa anovaka eiyo Exynos 4G (SM-N975F) uye iyo 5G (SM-N976F) akasiyana muROM tambo yakabatanidzwa pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy Cherechedzo 10+
Samsung haina kuvandudza yakajairwa Galaxy S III kupfuura Android 4.3 Jelly Bean, asi izvo hazvireve kuti haugone kumhanyisa yazvino vhezheni yeApple pane ino foni. Imba isiriyo ye LineageOS 18.0 yakavakirwa paApple 11 yave kuwanikwa kune yepasi rose 3G musiyano weGPS S III.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy S III
14.3. Samsung Galaxy S4 LTE Yepamberi
Iyo "LTE Yepamberi" musiyano weiyo Galaxy S4 (modhi nhamba GT-I9506) inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza necrDroid 7.0 tsika ROM. Iyi ROM inoda yazvino stock modem uye bootloader, saka ive shuwa kurodha pasi nekuvhenekera ivo pamberi.
crDroid 7.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy S4 LTE Yepamberi
14.4. Samsung Galaxy S4 Mini Kukosha Edition
Kana iwe uine Galaxy S4 Mini Value Edition (GT-I9195I) yakarara yakatenderedza uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, wozoenda kumberi uye utarise unofficial LineageOS 18.0 tsika ROM yakabatana pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition
Yakatangwa kudzoka muna2014, iyo Snapdragon 801-inofambiswa Samsung Galaxy S5 LTE ikozvino yagamuchira unofficial kuvaka yecrDroid 7.0 pamusoro peiyo Android 11. Ziva kuti iyo kuvaka kweiyo mbiri SIM musiyano (kodhi-zita "klteduos") haisipo zvakadaro.
crDroid 7.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy S5 LTE
14.6. Samsung Galaxy S7 uye Galaxy S7 Edge
Kana iwe uine Samsung Galaxy S7 kana Galaxy S7 Edge uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, enda kumberi uye utarise unofficial kuvaka kweLineageOS 18.0 yakabatana pazasi. Iro ROM inoita kunge yakagadzikana zvakakwana, neiyo bug runyorwa ichingotaura chete kuti Hardware munyori anogona kunge asiri kushanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11: Samsung Galaxy S7 || Galaxy S7 Edge
14.7. Samsung Galaxy S10e, S10, uye S10 +
Samsung haisati ichitsikisa yakagadzikana Android 11 inovakira iyo 2019's mureza weGPS S10 nhepfenyuro, asi isiri yeofficial Android 11-based LineageOS 18.0 ROM yeiyo Exynos misiyano yefoni idzi yatovepo pane edu maforamu. Iyo ROM inoda kuita zvizere, iine zvese zvakakosha zvemahara maficha ari kushanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy S10e / S10 / S10 +
Iyo Wi-Fi chete musiyano weiyo Samsung Galaxy Tab S5e inowana zvisina kufanira kuvaka ye LineageOS 18.0 yakavakirwa pa Android 11. Unofanirwa kuve pane ichangoburwa stock Android 10 firmware usati wabhenekesa tsika yeROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)
Kana iwe uine iyo LTE modhi, hapana chikonzero chekushushikana. Pane kumwe kuvaka kusiri pamutemo kweLineageOS 18.0 yehwendefa iri (rakabatanidzwa pazasi), rinoenderana nemisiyano miviri.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi + LTE)
1. Sharp Aquos S2 (s2) MutsaraOS 18.0 October 12, 2020
Iyo isina kufanira kuvaka yeakakurumbira LineageOS tsika ROM yakanangana ne Android 11 yave kuwanikwa yeSharp Aquos S2. Kune mamwe mabugs, zvakadaro, saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako zvakafanana usati waenderera.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sharp Aquos S2
1. Sony Xperia 10 (kirin) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
2. Sony Xperia 10 Plus (mermaid) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
4. Sony Xperia XA2 (piyona) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
5. Sony Xperia XA2 Plus (rwendo) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
6. Sony Xperia XA2 Ultra (kuwanikwa) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
8. Sony Xperia Z5 (chidimbu) MutsaraOS 18.0 October 12, 2020
9. Sony Xperia Z5 Compact (suzuran) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
16.1.Sony Xperia 10
Android 11 pane iyo Sony Xperia 10 yave kuwanikwa muchimiro cheiyo isiri iyo LineageOS 18.0 ROM. Kunze kwekuratidzwa kweWi-Fi, panenge pasina hombe bug mune yazvino kuvaka.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia 10
16.2. Sony Xperia 10 Uyezve
Saizvozvowo, iyo Sony Xperia 10 Plus yagamuchira unofficial LineageOS 18.0 ROM yakavakirwa pa Android 11. Iyo yekuvaka haina kubatana, hazvo, zvinoreva kuti haugone kupenya iyo Xperia 10 ROM pane iyo "Plus" musiyano (kana zvinopesana ).
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia 10 Plus
Android 11 pane iyo Sony Xperia M4 Aqua inowanikwa muchimiro chevanilla AOSP 11.0 ROM. Chinonyanya kufadza ndechekuti ngarava dzeROM dzine mainline Linux Kernel. Verenga zvimwe nezvazvo pano.
AOSP 11.0 yeiyo Sony Xperia M4 Aqua
Kana iwe uchitsvaga iyo AOSP 11-yakavakirwa ROM kune yako Sony Xperia XA2, unogona kusarudza iyo isiri yepamutemo LineageOS 18.0 ROM. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine iyo bug runyorwa ichingotaura chete kuti Wi-Fi kuratidza hakusi kushanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia XA2
16.5. Sony Xperia XA2 Uye
Unofficial LineageOS 18.0 ROM inowanikwa kune iyo Sony Xperia XA2 Plus futi. Ziva kuti kumutsiridza kubva kune yepamutemo LineageOS 17.1 kune iyi ROM haina kukurudzirwa.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia XA2 Plus
Android 11 zvakare inosvika pane iyo Sony Xperia XA2 Ultra kuburikidza neiyo isiriyo yekuvaka yeLinageOS 18.0. Iwe unofanirwa kuve pane ichangoburwa stock Android 10 firmware usati wabhenekesa iyo tsika ROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia XA2 Ultra
Iyo Sony Xperia XZ2 yakagamuchira kuravira kweiyo Android 11 neruremekedzo rwevanilla AOSP tsika ROM. Nhau hombe pano ndeyekuti SELinux mune iyi ROM yakaiswa sekumanikidza. Kune mamwe mabugs, zvakadaro, saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako zvakafanana usati waenderera.
AOSP 11.0 yeiyo Sony Xperia XZ2
Kuvaka kusiri pamutemo kweLineageOS 18.0 kunounza Android 11 kune iyo Sony Xperia Z5. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia Z5
16.9. Sony Xperia Z5 Yakabatana
Kana iwe uine "Compact" musiyano weXperia Z5, unogona zvakare kuedza unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 kuti uwane Android 11 pafoni yako. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, iyo FM Radio haisi kushanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Sony Xperia Z5 Compact
1. POCO F1 (bheririamu) Reloaded OS
2. POCO X2 / Redmi K30 (phoenix) AOSP 11.0 September 29, 2020
4. Redmi 1S (ruoko) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
5. Redmi 3S (nyika) NusantaraProject 2 September 21, 2020
6. Redmi 4A (rolex) AospEkuwedzera 8.0 September 29, 2020
7. Redmi 4X (santoni) KutsivaOS 4.0 September 21, 2020
8. Redmi 5 (yakanaka) KutsivaOS 4.0 September 29, 2020
9. Redmi 5 Uyezve / Redmi Cherechedzo 5 (vince) KutsivaOS 4.0 September 29, 2020
14. Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael) AOSP 11.0 September 11, 2020
15. Redmi Cherekedza 4 (mido) AOSP 11.0 September 24, 2020
16. Redmi Ona 5 / Redmi Ona 5 Pro (Nei) MutsaraOS 18.0 September 17, 2020
17. Redmi Cherechedzo 6 Pro (tulip) Pixel Yakawedzerwa 11 October 16, 2020
18. Redmi Cherechedzo 7 / 7S (lavender) Weeb Project September 24, 2020
19. Redmi Cherechedzo 7 Pro (violet) CesiumOS 3.0 October 12, 2020
20. Redmi Cherechedzo 8 (ginkgo)
Redmi Tarira 8T (willow)
21. Redmi Tarira 8 Pro (begonia) CesiumOS 3.0 October 30, 2020
22. Redmi Cherechedzo 9S / 9 Pro India (curtana)
Redmi Cherechedzo 9 Pro Max (excalibur)
POCO M2 Pro (gramu)
24. Xiaomi Mi 3 (canker)
Xiaomi Mi 4 (canker)
MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
25. Xiaomi Mi 5 (gemini) MutsaraOS 18.0 October 2, 2020
26. Xiaomi Mi 5s (capricorn) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
27. Xiaomi Mi 5s Plus (natrium) MutsaraOS 18.0 September 29, 2020
28. Xiaomi Mi 6X (wayne) KutsivaOS 4.0 November 19, 2020
30. Xiaomi Mi 9 (cepheus) Urume 1.0 September 29, 2020
31. Xiaomi Mi 9 SE (grus) Evhangeri X November 19, 2020
32. Xiaomi Mi A1 (tishu YAAP September 21, 2020
37. Xiaomi Mi Sanganisa 2 (chiron) KutsivaOS 4.0 November 9, 2020
38. Xiaomi Mi Sanganisa 2S (polaris) MuseveOS 11.0 September 29, 2020
39. Xiaomi Mi Sanganisa 3 (persus) MuseveOS 11.0 October 16, 2020
40. Xiaomi Mi Cherechedzo 3 (jasoni) crDroid 7.0 November 19, 2020
41. Xiaomi Mi Cherechedzo 10 Lite (toco) MutsaraOS 18.0 November 19, 2020
MutsaraOS 18.0 October 20, 2020
Kune fan inofarira POCO F1, unogona kuyedza iyo ReloadedOS ROM yakavakirwa pa Android 11. Iyo ROM inoratidzirwa se "beta" uye zvinoita sekunge pasina makuru makuru (kunze kweBluetooth odhiyo) chero. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
ReloadedOS yakavakirwa Android 11 yeiyo POCO F1
Iyo yepamutemo kuvaka kweArrowOS pamusoro peiyo Android 11 inowanikwawo iyo POCO F1. Iro ROM inoita kunge yakagadzikana, kunyangwe SELinux mune iyi ROM yakaiswa seinobvumidza.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo POCO F1
Iyo POCO X2 yakagamuchira yakachena Android 11-based AOSP ROM. Iyo yekuvaka inoenderanawo neiyo 4G musiyano weRedmi K30.
AOSP 11.0 yeiyo POCO X2 / Redmi K30
Kana iwe uchitsvaga AOSP 11-based ROM kutsiva iyo MIUI firmware pane yako POCO X3, unogona kusarudza iyo isiri iyo PixysOS v4.0.1 ROM. Hatina kukwanisa kuwana runyorwa rwebug yeROM, asi izvozvo hazviite kuti igadzirire kuve mutyairi wezuva nezuva.
PixysOS v4.0.1 yakavakirwa Android 11 yeiyo POCO X3
Yakatangwa kumashure mu2014, iyo Snapdragon 400-inofambiswa Redmi 1S ikozvino yagamuchira unofficial kuvaka yeLinageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11. Ziva kuti iwe unofanirwa kudzosera mudziyo wako usati wabhenekera iyi ROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 1S
Iyo Redmi 3S - foni yakatanga kuburitswa kumashure mu2016 ine Android Marshmallow - yagamuchira yayo yekutanga Android 11-yakavakirwa tsika ROM kuburikidza neNusantaraProject. Ziva kuti iyo ROM inouya isina Google maapp.
NusantaraProject 2 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 3S
Iyo Android 11-based AospExtended 8.0 inovakwa yave kuwanikwa yeRedmi 4A. Iyi ROM inoratidzirwa se "Beta Preview", saka isu tinogona kuraira chete vashandisi vane ruzivo vanozviedza panguva ino. Kana iwe ukagumburwa nechero sensor, kamera, kana Wi-Fi zvine chekuita nenyaya, saka zvinokurudzirwa kudzoreredza kugovera uye flash firmware.
AospExtended 8.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 4A
Xiaomi haana kugadzirisa iyo Redmi 4X kupfuura Android Nougat, asi hazvireve kuti haugone kumhanyisa iteration yeApple pane ino foni. Kuvaka kusiri pamutemo kweRevengeOS kwakavakirwa Android 11 yave kuwanikwa yeRedmi 4X. Ziva kuti ikozvino kuvaka hakuenderane neyuniti ine Goodix yeminwe yekukora.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 4X
Iyo Redmi 5 inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza neRevengeOS 4.0 tsika ROM. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 5
17.9. Redmi 5 Uyezve / Redmi Cherechedzo 5
The Qualcomm Snapdragon 625-powered Redmi 5 Plus (inotengeswa seRedmi Note 5 muIndia) inowana Android 11 muchimiro cheRevengeOS 4.0 tsika ROM. Iyo ROM inoda kuita zvizere, iine zvese zvakakosha zvemahara maficha ari kushanda.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 5 Plus
Anovakwa zvepamutemo zveNusantaraProject tsika yeROM yakavakirwa paApple 11 yave kuwanikwa yeRedmi 5A. Iyo ROM inoratidzirwa se "beta", saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako nezvembug usati waenderera.
NusantaraProject 2 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi 5A
Android 11 pane iyo Redmi 6 Pro inowanikwa muchimiro chevanilla AOSP ROM. Iyo ROM yekuvandudza inopawo yakagadziridzwa TWRP gadzira kupenya ROM.
AOSP 11.0 yeiyo Redmi 6 Pro
17.12. Redmi 7 uye Redmi Y3
Iyo yakabatana Android 11-based AOSP ROM yave kuwanikwa yeRedmi 7 uye iyo Redmi Y3. Iwe unofanirwa kupenya iyo yazvino yakagadzikana MIUI firmware yemuenzaniso wako usati wabhenekera iyi ROM.
AOSP 11.0 yeiyo Redmi 7 / Y3
The Qualcomm Snapdragon 730-powered Redmi K20 inowana Android 11 muchimiro chePOSP tsika ROM. Iyo yekuvaka inoenderana neMi 9T futi.
POSP 4.0.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi K20 / Mi 9T
Sezvambotaurwa, iyo Redmi K20 Pro (inotengeswa seMi 9T Pro mune mamwe matunhu) yave foni yekutanga kugamuchira iyo Android 11 tsika ROM.
AOSP 11.0 yeiyo Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
17.15. Redmi Cherechedzo 4
Iyo Redmi Cherechedzo 4 yakagamuchira kuravira kweiyo Android 11 neruremekedzo rwevanilla AOSP tsika ROM. Nhau hombe pano ndeyekuti SELinux mune iyi ROM yakaiswa sekumanikidza. Kune mamwe mabugs, zvakadaro, saka ita shuwa kuti iwe unozvida pachako zvakafanana usati waenderera.
AOSP 11.0 yeiyo Redmi Cherechedzo 4
17.16. Redmi Cherechedzo 5 / Redmi Cherechedzo 5 Pro
Kuvaka kusiri pamutemo kweiyo yakakurumbira LineageOS tsika yeROM yakavakirwa paApple 11 yave kuwanikwa yeRedmi Note 5 Pro (inozivikanwa seRedmi Cherechedzo 5 mune mamwe matunhu) Iyo LineageOS timu haisati ichizobatanidza yavo tsika maficha pamusoro peiyo AOSP 11 codebase, ndosaka iyo ROM iri yakajeka yakawanda isina barebones padanho razvino.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi Cherechedzo 5 Pro
17.17. Redmi Cherechedzo 6 Pro
Chikwata chiri kumashure kwePixel Yakawedzerwa tsika ROM ichangoburitsa yekutanga Android 11-yakavakirwa iyo Redmi Note 6 Pro. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
Pixel Yakawedzerwa 11 yakavakirwa paApple 11 yeiyo Redmi Note 6 Pro
17.18. Redmi Cherechedzo 7 / 7S
Iyo Redmi Cherechedzo 7 uye Cherechedzo 7S ikozvino inomhanya Android 10 neMIUI, asi XDA ine tarenda mushure mekutangisa nharaunda yakatouya neyakajeka Android 11-yakavakirwa tsika ROM yeaya mafoni. Inonzi Weeb Projekt, iyo ROM iri kushanda zvizere, iine zvese zvakakosha zvemahara zvinoshanda.
Weeb Projekt yakavakirwa pane Android 11 yeiyo Redmi Cherechedzo 7 / 7S
17.19. Redmi Cherechedzo 7 Pro
Iyo yepamutemo beta kuvaka kweiyo CesiumOS tsika ROM yakavakirwa Android 11 yave kuwanikwa yeRedmi Note 7 Pro. Iyo ROM yakanaka kwazvo isina mabhononi padanho razvino, saka usazvione semutyairi wezuva nezuva zvinhu.
CesiumOS 3.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi Cherechedzo 7 Pro
17.20. Redmi Cherechedzo 8 uye Redmi Cherechedzo 8T
Iyo Redmi Cherechedzo 8 uye Chiziviso 8T duo yakawana yakabatana Android 11-based AOSP ROM. Kana iwe wagadzirira kufuratira glitches muWi-Fi Ratidza uye ADB pamusoro pe USB, iyo ROM inoita kunge iri muchimiro chakanaka chechimwe chinhu chiri kuvakwa pane itsva OS vhezheni iyo yakatangwa vhiki rapfuura.
AOSP 11.0 yeiyo Redmi Cherechedzo 8 / 8T
17.21. Redmi Cherechedzo 8 Pro
Iyo Redmi Cherechedzo 8 Pro inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza neCesiumOS tsika ROM. Iyi ROM inoda hybrid firmware, saka ita shuwa kuti dhawunirodha uye upenye iyo yazvino CFW package yeichi chishandiso kare.
CesiumOS 3.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi Cherechedzo 8 Pro
17.22. Redmi Cherechedzo 9S / 9 Pro India, Redmi Cherechedzo 9 Pro Max, uye POCO M2 Pro
Xiaomi's Snapdragon 720-zvigadzirwa zvinogashirwa zvakagovaniswa kuvaka kweStatiXOS v4.0 pamusoro peiyo Android 11. Ziva kuti izvozvi kuvaka hakuenderane nemusiyano wepasi rose weRedmi Note 9 Pro (kodhi-zita "joyeuse") se zve zvakadaro.
StatiXOS v4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi Cherechedzo 9S / 9 Pro India / 9 Pro Max uye POCO M2 Pro
Kune avo vamuri kumirira nemoyo wese Android 11-yakavakirwa tsika maROM kune yako Redmi S2 (inozivikanwawo seRedmi Y2 mune mamwe matunhu), isu tine dzimwe nhau dzakanaka kwauri: iyo yepamutemo kuvaka kweLegionOS yasvika yemhando iyi. Kana iwe uchida kuyedza iyo, tungamira pamusoro peiyo foramu tambo pazasi.
LegionOS yakavakirwa Android 11 yeiyo Redmi S2 / Y2
17.24. Xiaomi Mi 3 uye Mi 4
Kana iwe uchiri neMi 3 kana Mi 4 yakarara yakatenderedza, unogona ikozvino kupenya iyi isiri yeLineageOS 18.0 ROM yakavakirwa pa Android 11 kuti uwane kuravira kweiyo Android 11. Iyo ROM iri kuda kuita zvizere, nezvose zvakakosha zvigadzirwa zvehardware zvinoshanda.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 3 uye Mi 4
Kana iwe uchitsvaga iyo AOSP 11-yakavakirwa ROM pachinzvimbo chezera rekare MIUI kuvaka pane yako Mi 5, unogona kusarudza iyo isiriyo LineageOS 18.0 ROM. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, kunyangwe SELinux iri mune inobvumidza maitiro.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 5
Android 11 paMi ​​5s inowanikwa muchimiro cheLineageOS 18.0. Pane zvipembenene zvishoma zvaungangoda kubata nazvo, zvakadaro. Semuenzaniso, iyo yeminwe yekunzwa inzwa ngoro, uye SELinux inoiswa seyakaregedzera.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 5s
17.27. Xiaomi Mi 5s Uyezve
Yakatangwa kumashure muna 2016, iyo Snapdragon 821-powered Mi 5s Plus ikozvino yagamuchira unofficial kuvaka yeLineageOS 18.0 pamusoro peiyo Android 11.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 5s Plus
Kana iwe uchitsvaga AOSP 11-yakavakirwa ROM pane iyo MIUI ganda pane yako Mi 6X, unogona kusarudza iyo isiri iyo RevengeOS 4.0 ROM. Ipo SELinux mune iyi ROM yakagadzwa seyakaregedzera, iwe unogona kuramba uchinjira kumanikidza kubva kumagadzirirwo emidziyo
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 6X
Iyo Xiaomi Mi 8 yakagamuchira kuravira kweiyo Android 11 neruremekedzo rwePixelROM. Nhau hombe pano ndeyekuti SELinux mune iyi ROM yakaiswa sekumanikidza. Nekudaro, iyo yazvino inovaka nemaune spoofs chishandiso chigunwe zvigunwe kuitira pasa SafetyNet.
PixelROM yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 8
Kana iwe uine Xiaomi Mi 9 uye uchida kuyedza Android 11 pafoni yako, wozoenda kumberi uye uone iyo Fluid 1.0 tsika ROM yakabatana pazasi.
Fluid 1.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 9
Android 11 zvakare inosvika pane iyo "SE" musiyano weMi 9 kuburikidza neiyo isiri yepamutemo kuvaka kweEvolution X. Kana iwe uchizoda kuzviyedza, tungamira kumusoro kune foramu tambo yakabatanidzwa pazasi.
Evhangeri X yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi 9 SE
Iyo Xiaomi Mi A1 inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza neYAAP tsika ROM. Iyi ROM ine zvimwe zvinetswa neiyo proximity sensor uye Wi-Fi Direct, asi kana iwe ukakwanisa kuzvikanganwa izvo, iwe unogona kuve neyako yekutanga kuravira yazvino Android vhezheni.
YAAP yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi A1
Iyo Xiaomi Mi A2 inowana isiri yepamutemo Android 11 kuburikidza nePOSP tsika ROM. Iyi ROM ine dzimwe nyaya neGoodix zvigunwe zvigunwe uye isina waya kukanda, asi kana iwe uchikwanisa kuzvikanganwa izvo, unogona kuve neyako yekutanga kuravira yazvino Android vhezheni.
POSP 4.0.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi A2
Iyo Android 11-yakavakirwa AOSP yekuvaka yave kuwanikwa yeMi A2 Lite. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine runyorwa rwebug rinongotaura chete kuti SELinux inotendera
AOSP 11.0 yeiyo Xiaomi Mi A2 Lite
Kuve iri Android Imwe chishandiso, iyo Xiaomi Mi A3 yatomhanyisa yepedyo-ku-stock vhezheni yeAroid. Uye ikozvino, unogona kunakidzwa neese matsva maficha eApple 11 kuburikidza neAOSP 11.0 tsika ROM.
AOSP 11.0 yeiyo Xiaomi Mi A3
17.36. Xiaomi Mi Max uye Mi Max Prime
Iyo yekutanga Mi Max uye Mi Max Prime vakagamuchira unofficial LineageOS 18.0 ROM pamusoro peiyo Android 11. Unofanirwa kuve pane ichangoburwa stock Android Nougat firmware usati wabhenekesa iyo tsika ROM.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Max uye Mi Max Prime
17.37. Xiaomi Mi Sanganisa 2
Anovakwa zviri pamutemo zveRevengeOS tsika yeROM yakavakirwa paAroid 11 yave kuwanikwa kuMi Mix 2. Hatina kugona kuwana runyorwa rweROM, asi izvozvo hazviite kuti igadzirire kuve mutyairi wezuva nezuva zvinhu izvozvi.
RevengeOS 4.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Sanganisa 2
17.38. Xiaomi Mi Sanganisa 2S
Chikwata chiri kumashure kweArrowOS tsika ROM ichangoburitsa yayo yekutanga Android 11-yakavakirwa iyo Mi Mix 2S. Kunyangwe iri chivakwa chepamutemo, chengetedza rese rakakosha dhata usati wabhenekera.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Sanganisa 2S
17.39. Xiaomi Mi Sanganisa 3
Android 11 paMi ​​Mix 3 inowanikwa muchimiro chekuvaka zviri pamutemo kweArrowOS. Iyo ROM inoita kunge yakagadzikana, iine bug runyorwa ruchingotaura chete kuti Wi-Fi Ratidza uye Android Auto haisi kushanda.
ArrowOS 11.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Sanganisa 3
17.40. Xiaomi Mi Cherechedzo 3
Chikwata chiri kumashure kwecrDroid tsika ROM yakaburitsa yekutanga Android 11-yakavakirwa iyo Mi Note 3. Kunze kwekutendera SELinux, isu hatina kukwanisa kuwana yakakodzera bug runyorwa rweROM, asi izvo hazviite kuti igadzirire kuve zuva nezuva mutyairi zvinhu.
crDroid 7.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Cherechedzo 3
17.41. Xiaomi Mi Cherechedzo 10 Lite
Kana iwe uchitsvaga iyo Android 11-yakavakirwa tsika ROM yeMi Yako 10 Lite, unogona kuyedza iyo isiriyo yeLineageOS 18.0 ROM yakabatana pazasi. Iyi ROM ine zvimwe zvine chekuita ne-inoratidzira zvigunwe scanner, asi kana iwe uchikwanisa kuzviteerera izvo, unogona kuve neyako yekutanga kuravira yazvino Android vhezheni.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Cherechedzo 10 Lite
17.42. Xiaomi Mi Pad 4 uye Mi Pad 4 Uyezve
Kuvaka kwakabatana kweLineageOS 18.0 ikozvino kwave kuwanikwa kweMi Pad 4 uye Mi Pad 4 Plus. Ipa piritsi rako chitsva chehupenyu neiyo Android 11 nekutevera iyi link iripazasi.
LineageOS 18.0 yakavakirwa Android 11 yeiyo Xiaomi Mi Pad 4 / Mi Pad 4 Uyezve
Android 11 Google Mapurogiramu
Kunze kwemaROM ataurwa pamusoro, isu tichave tichiona yakawanda yetsika inovaka yeApple 11 yakaburitswa mumavhiki anotevera. Zvisinei, kwete dzose tsika dzeROM dzinotakura ne-pre-installed Google apps. Kana iwe uchitsvaga yakakodzera GApps kugoverwa, ipapo iwe uchave unofara kuziva kuti akati wandei maApplication ekuparadzira akatovandudzwa kutsigira yazvino vhezheni yeApple.
XDA Nhengo Yakakwirira Nikhil yawedzera uye yakaburitsa yakagadziridzwa vhezheni yeiyo NikGapps package. Iyo SetupWizard module mukati mekuparadzirwa kweGapps inozivikanwa kunge ine dambudziko, asi iwe unogona kugadzirisa izvi nekusvetuka module uchishandisa nikgapps.config kana kupenya izvo zvakasiyana pasina SetupWizard.
XDA Nhengo Yakakwirira TheHitMan yakagadzirisa zvakare BiTGApps package. Kuburitswa kwazvino, kumakwa se R16, ikozvino inowirirana ne Android 11.
Wakamboona tsika yeROM pane edu maforamu echinhu chatisina kufukidza izvozvi? Tizivisei mune zvakataurwa pazasi!
The post Android 11 Yetsika ROM Rondedzero - Unofficially Gadziridza Yako Android Runhare! yakatanga kutanga xda-vatadzi.